Inona no ataon'ny SKM - Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Inona no ataon'ny SKM
Ny serivisy teknika dia hotanterahina amin'ny lafiny rehetra, manomboka amin'ny dingana mialoha ny fivarotana ka hatramin'ny dingana aorian'ny fivarotana. Araka ny endri-javatra tsy ampoizin'ny mpanjifa rehetra dia manome anao soso-kevitra sy serivisy namboarina izahay.
Ireo manampahaizana manokana dia afaka manolotra fiofanana samy hafa amin'ny fanamboaranay, na mivantana amin'ny toeran'ny mpanjifa. Izahay dia mahazo antoka fa mahatakatra tsara ny fitaovan'ny SKM ny mpiasao hiantohana ny fahombiazanao sy ny fahombiazanao.
Miresaka momba ny fampitaovana anao izahay. Amin'ny alàlan'ny fandrefesana rehetra sy ny fizahana amin'ny antsipiriany, ampahafantarinay anao ny fanatsarana rehetra, ny fanamboarana ary ny fikojakojana ilain'ny tranonao. Ary amin'ny alàlan'ny fikolokoloana, dia maminavina ny olana mety hitranga rehetra izahay, manampy ny masininao hiasa tsara amin'ny fotoana fohy kokoa.
SKM dia manana tahiry voatahiry voatahiry tsara, ny faritra rehetra dia mahafeno fepetra tanteraka ary vonona ny halefa any amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao. Manome toky izahay fa ny fotoana fohy indrindra sy ny kalitao tsara indrindra. Ny torolàlana momba ny fivoriambe dia halefa miaraka amin'ireo kojakojanay.
Mba hanolorana ny vokatra fampisehoana tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika, SKM tsy mitsahatra miasa amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ny vokatra. Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 12 taona eny an-kianja, manampahaizana manokana izahay manatsara ny toerana misy anao amin'ny asanao manokana.